जनकपुर विमानस्थल : रात्रिकालीन उडान दुई महिनापछि, हवाई इन्धन मुख्य समस्या - Himal Live- Leading News Portal from Nepal
सुरज घिमिरे ३ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार १०:१३
यहि पुसदेखि रात्रिकालीन विमान सेवा सुरू गर्ने भनिएको जनकपुर विमानस्थल ‘प्राविधिक कारणबस’ दुई महिना पछाडि धकेलिएको छ । रात्रिकालीन अवतरणका लागि विमानस्थलको धावनमार्ग निर्माणको कार्य शतप्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । तर, ‘लाइट’ (बत्ती)को कार्य सम्पन्न नभएकाले रात्रिकालीन सेवा सुरू हुन नसकेको विमानस्थलले बताएको छ ।
विमानस्थलका प्रवन्धक सन्तोष ढकालका अनुसार रात्रिकालीन सेवाका लागि आवश्यक पर्ने धावनमार्ग निर्माण कार्यले पूर्णता पाइसके पनि लाइटको कार्य हुन नसकेकाले रात्रिकालीन उडान सुरू हुन नसकेको हो । अब दुई महिनापछि विमानस्थलमा रात्रिकालीन उडान सुरू हुने ढकालले जानकारी दिए ।
पुसदेखि नै रात्रिकालीन उडान सुरू गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि धावनमार्गमा आवश्यक पर्ने लाइटिङ, थ्रेस होल्ड लाइटिङ, रनवे लाइटिङ, पार्किङ लाइटिङलगायतका कार्यहरू अझै पूरा हुन सकेको छैन । प्रवन्धक ढकालका अनुसार ती कार्य पूरा गर्न अझै दुई महिना लाग्छ । त्यसपछि भने रात्रिकालीन उडान सुरू हुने उनको भनाइ छ ।
बन्दैछ टर्मिनल भवन
विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल भवन पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ । ६ वर्षपहिले सुरू भएको टर्मिनल भवनको निर्माण कार्य अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । नयाँ टर्मिनलको आउट साइडको सम्पूर्ण काम पूरा भएको विमानस्थलले जनाएको छ ।
टर्मिनलभित्र अहिले इलेक्ट्रिकल सामानको साथै प्लम्बिङको काम हुँदै छ । वि.सं. २०७६ को सुरूवातसँगै नयाँ टर्मिनलबाट विमानस्थलले सेवा प्रदान गर्ने प्रवन्धक ढकालले जानकारी दिए ।
कमजोर भिजिबिलिटीको समस्या
ढकालका अनुसार नयाँ टर्मिनल भवनबाट सेवा सुरू नभएपनि धावनमार्गको प्राविधिक कार्य पूरा भएपछि रात्रिकालीन उडान सुरू गर्ने विमानस्थलको तयारी छ ।
‘नयाँ टर्मिनलमा हामी नसर्दै पनि धावनमार्गमा प्राविधिक काम पूरा भएको खण्डमा २ महिनापछि रात्रिकालिन सेवा दिन सक्छौं,’ ढकालले न्युज कारोबारसँग भने, ‘दिउँसोको समयमा पटक-पटक भिजिबिलिटीको कारण विमान अवतरणमा समस्या भई उडान रद्ध हुँदै आएकामा त्यसबाट मुक्त भई विहान, बेलुका, राति जति बेला पनि विमान अवतरण गर्न विमानस्थलमा सहज हुनेछ ।’
ढकालका अनुसार विमान अवतरणका लागि २ हजार भिजिबिलिटी आवश्यक हुन्छ । तर अहिले विमानस्थलमा उक्त मात्रामा भिजिबिलिटी छैन, जसका कारण जोखिम मोलेरै विमान अवतरण गर्नुपरिरहेको छ । जनकपुर विमानस्थलमा अहिले एक हजार ५ सय भिजिबिलिटी छ सोही भिजिबिलिटीमा विमान अवतरण हुँदै आएका छन् ।
दुइटा छन्, तेस्रो आउँदै
अहिले बुद्ध एयर र यति एयरले उडान भर्दै आएका छन् । बुद्धले २ र यतिले १ गरी जम्मा तीन वटा उडान जनकपुर विमानस्थलबाट हुन्छ ।
जनकपुर उडान भर्ने तेस्रो विमान कम्पनीका रूपमा श्री एयरलाइन्सले सेवा सुरू गर्न लागेको ढकालले जानकारी दिए । श्री अहिले विमान खरिद प्रक्रियामा रहेको छ । प्रदेश-२ मै राजविराजबाट उडान भर्दै आएको छ ।
जनकपुर विमानस्थल वि.सं. २०२४ असोज ८ गतेदेखि नियमित सञ्चालनमा आएको हो । त्यस हिसाबले यो नेपालको पुरानो विमानस्थलमध्येमा पर्छ ।
जनकपुर अहिले प्रदेश-२ को अस्थाई राजधानी हो । तर, कतिपयले प्रदेशको स्थायी राजधानी पनि जनकपुर नै कायम हुने बताउने गरेका छन् । जसका कारण विमानस्थलको महत्व र ‘हवाई ट्राफिक’ बढ्ने सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ ।
त्यसो त जनकपुर धार्मिक नगरी पनि हो जसका कारण पर्यटकको आगमनमा पनि विस्तारै वृद्धि हुँदै गएको छ । जसमध्ये हवाइ मार्गबाट आउनेहरू पनि छन् । धार्मिक सांस्कृतिक रुपमा जनकपुरधामको आफ्नै पहिचान भएकाले पनि हवाई मार्गबाट आउने पर्यटकहरुको संख्यामा वृद्धि हुन थालेको छ ।
इन्धन बोक्नु कि यात्रुको लगेज ?
७२ जना यात्रु बोक्ने क्षमताको विमानबाट बुद्ध एयरले जनकपुर उडान भर्दै आएको छ । बुद्ध एयरले जनकपुरमा दैनिक दुईवटा उडान गर्छ ।
तर, विमानस्थलमा हवाई इन्धनको व्यवस्था हुन नसकेकाले आफूहरूलाई असुविधा भएको एयरले जनाएको छ । बुद्ध एयरका जनकपुर प्रवन्धक विजय प्रसाद सिंह स्तरोन्नतिसँगै विमानस्थलमा हवाई इन्धनको व्यवस्था हुन सके हवाई यात्रा अझ सहज हुनेछ ।
उनका अनुसार काठमाडौंबाट जनकपुरका लागि उडान भर्ने विमानले ३ सय ५० लिटर इन्धन बोक्नुपर्ने हुन्छ जसले विमानमा भने जति लगेज राख्न सकिँदैन । जनकपुरमै हवाई इन्धन उपलब्ध हुन सके हवाई इन्धन कम बोकेर आउँदा यात्रुहरुलाई अन्य सुविधा दिन सकिने उनले बताए ।
प्रदेशका तीन वटा विमानस्थलबाट हाल दैनिक उडान हुन्छ । धनुषाको जनकपुर, सप्तरीको राजविराज र बाराको सिमराबाट विमानस्थलबाट हवाइ उडान हुँदै आएको छ । यद्यपी तीन वटै विमानस्थलमा हवाई इन्धनको सुविधा छैन ।
विमानस्थलमा इन्धन भर्ने सुविधा नभएकाले आफुहरुले चाहेर पनि यात्रुलाई छुट सुविधा दिन नसकेको बुद्ध एयरका प्रवन्धक सिंहले बताए ।
प्रयास हुँदैछ : ढकाल
विमानस्थलका प्रवन्धक ढकाल पनि विमानस्थलमा इन्धनको व्यवस्था भए विमान कम्पनीले यात्रुलाई थप सुविधा दिन सक्ने कुरा स्वीकार्छन् । ‘यहीँ इन्धनको व्यवस्था हुन सके विमान कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ,’ ढकालले भने, ‘विमान कम्पनीलाई फाइदा हुने भएपछि उनीहरूले पनि यात्रुलाई विभिन्न योजना र स्किम दिन्छन्, जसबाट अप्रत्यक्ष्य रूपमा यात्रुलाई फाइदा हुन्छ ।’
विमानस्थलमा हवाई इन्धनको व्यवस्था गर्न केही वर्ष पहिले पनि नेपाल आयल निगमले पहल गरेको पाइन्छ । विमानस्थलको भित्र गेट अगाडि गुठि संस्थानको जग्गा लिजमा लिएर हवाई इन्धनको डिपो राख्ने नेपाल आयल निगमले सुरुवात गरेको भए पनि हालसम्म भने कुनै आधिकारिकता पाएको छैन ।
विमानस्थल प्रवन्धक ढकालले भने, ‘म जनकपुर आएको १ महिना मात्रै भएको छ, सक्दो प्रयास गर्दैछु, नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धन बेच्न चाहेको खण्डमा २/४ जना कर्मचारी राख्नुपर्ने हुन्छ ।’
बुद्ध एयरका जनकपुर प्रवन्धक विजय प्रसाद सिंहले जनकपुरमै हवाई इन्धन भर्ने सुविधा भए यात्रुहरुलाई फाइदा हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘इन्धनको व्यवस्था जनकपुरमै गर्न प्रदेश-२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’
सिंहले नेपाल आयल निगमले टयाङ्कर राखेर विमानस्थलमा अस्थायी रुपमा समेत इन्धन बेच्न सक्छ । यस्तो प्रयास आयल निगमले झापाको भद्रपुरमा गर्दै आएको उनले बताए ।
विमानस्थलमा भित्रिँदै नयाँ प्रविधि
जनकपुर विमानस्थलले २०७६ सालको सुरुवातसँगै नयाँ टर्मिनल भवनबाट विमान उडान सेवा प्रदान गर्ने भएको छ । विमानस्थलमा अहिलेसम्म सुरक्षा जाँचका लागि एक्स–रे मेसिन, बारुणयन्त्रजस्ता अत्यावश्यक आधारभूत उपकरण अति आवश्यक भएकाले चाँडै आउँन लागेको विमानस्थल प्रवन्धक ढकालले जानकारी दिए ।
अबको २ महिनामा जनकपुर विमानस्थलमा बत्ती जडान कार्य सम्पन्न हुने र विमानस्थलमा सुरक्षा चाँजका लागि एक्सरे मेसिन, वारुण यन्त्र लगायतको उपकरण आउँन लागेको ढकालले बताए ।
विमानस्थलमा इन्धन भर्नेलगायतका पूर्वाधार बने आफूहरूले मार्च १ देखि राजविराज विमानस्थलमा एटिआर (७२ सिटे विमान) उडान सञ्चालन गर्न तयार रहेको बुद्ध एयरका जनकपुर प्रवन्धक सिंहले बताए ।
ढकालले जनकपुरमा क्वारेन्टाइन जाँच र हवाई इन्धनको व्यवस्था हुन सके जनकपुरबाट सिधा भारतको कलकत्ता र लखनउमा समेत उडान गर्न सकिने जानकारी दिए । बुद्ध एयरले ७२ सिटको एटिआर विमान जनकपुरबाट उडान गर्दै आएको छ । ७२ सिटको एटिआरले ४ घण्टा लामो यात्रा गर्ने एयरलाइन्स भएकाले जनकपुरबाट भारतको कोलकता र लखनउ समेत निकट भविष्यमै उडान भर्न सकिने उनको विश्वास छ ।